आज यी भगवतीको चरणमा दर्शन गर्नुहोस पुरा हुने छन् तपाईका सपना ! यहाँ आजकै दिनबाट दर्शनकालागि ठुलो भिड लाग्ने गर्छ – Etajakhabar
आज यी भगवतीको चरणमा दर्शन गर्नुहोस पुरा हुने छन् तपाईका सपना ! यहाँ आजकै दिनबाट दर्शनकालागि ठुलो भिड लाग्ने गर्छ
धनवीर महतो, महोत्तरी – मिथिलाञ्चलका विभिन्न देवी भगवतीको शक्तिपीठमा आजदेखि खोइछ भर्ने (एक विशेष प्रकारका पूजा) काम शुरु भइरहेको छ ।
भाकल एवं मनोकांक्षा पूरा भएपछि श्रद्धालु भक्तजनले माताको खोइछ भर्ने गरिन्छ । यस पटकको खोइछ भर्ने कार्य बडादशैँको सप्तमी तिथिदेखि शुरु भई अष्ठमी तिथिसम्म जारी रहने छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, आश्विन ३०, २०७५ समय: १८:५७:५९